ब्रम्हा मूहूर्तमा उठ्नुहोस्, प्राणवयु मिल्नेछ - होमपेज
तपाई कतिबजे उठ्नुहुन्छ ? पाँच, छ, सात ?
के तपाईले ओछ्यान छाड्दा घाम झलमल्ल भइसकेको हुन्छ ?
संभवत यी प्रश्नहरुको जवाफ तपाईले ‘अँ, हो त’ भन्नेमा दिनुहुन्छ । किनभने अहिले धेरैजसोको सुत्ने र उठ्ने तालिका लम्बिएको छ । मध्यरातमा सुत्ने र बिहान अबेर उठ्ने प्रवृत्ति छ, धेरैको । र, अहिलेका पुस्तालाई त सूर्योदयको दृश्य समेत हेर्न हम्मे पर्छ ।
हाम्रा पिता-पूर्खाहरु भन्थे, ‘बिहान चाडै उठ्नुपर्छ । ब्रम्हा मूर्हतमा उठ्नाले शरीर निरोगी हुन्छ । मन शुद्ध हुन्छ ।’ अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ, ‘अर्लि टु बेड, अर्लि टु राइज, मेक अ मेन हेल्दी, वेल्दी एन्ड वाइज ।’ राती चाडै सुत, बिहान चाडै उठ । स्वस्थ्य, बुद्धिमान र धनी हुन्छौं ।
वास्तवमा राम्रो दिनको सुरुवात गर्ने हो भने, हरेक बिहान सूर्योदयको दृश्य हेर्नुपर्छ । किनभने आज जुन सूर्योदयको दर्शन गरिन्छ, फेरी त्यो कहिल्यै गर्न सकिनेछैन ।
सूर्योदय अघिको समयलाई ब्रम्हा मूहूर्त भनिन्छ । हो, यही समयमा उठ्नुपर्ने बताइन्छ । यदि ब्रम्हा मूहूर्तमा उठ्ने र यताउता टहल्ने हो भने हामीलाई प्राणवायु मिल्छ । किनभने यस समयमा वायुमण्डलमा जुन वायु वहन्छ, त्यसलाई प्राण वायु भनिने गरिन्छ ।
ब्रम्हा मूर्हूतको समय बिहान सूर्योदयअघि चार वा पाँच बजेको बीचलाई मानिन्छ । यद्यपी हाम्रो धर्मशास्त्रले रातको अन्तिम प्रहरको तेस्रो हिस्सा वा चार घडीसम्म ब्रम्हा मूहूर्त हुन्छ । ब्रम्हा मूहूर्त नै उठ्नका लागि उचित समय हो । आखिर किन त ?
– ब्रम्हा मूहूर्तमा उठ्दा वायुमण्डलमा अति शुद्ध वायु चलिरहेको हुन्छ । यही वायु हाम्रो शरीरले ग्रहण गर्छ । यसबेला वायुमण्डल प्रदूषणरहित हुन्छ ।
-आयुर्वेदले यस समयमा बहने वायुलाई अमृततुल्य भनिएको छ । ब्रम्हा मूहूर्तमा उठेर टहल्दा शरीरमा संजीवनी शंक्ति संचार हुन्छ ।
– ब्रम्हा मूहूर्तमा उठ्दा सौन्दर्य, बल, स्वास्थ्य र बिद्या मिल्छ ।
पछिल्लो समय विज्ञानले पनि बिहान चाडै उठ्नुलाई अति उत्तम भनी पुष्टि गरेको छ । एक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार बिहान चाडै उठ्ने व्यक्तिमा डिप्रेसनको संभावना एकदम कम हुन्छ । जबकी बिहान अबेरसम्म सुत्ने व्यक्तिमा मोटोपन, तनाव, आलस्य, हृदयरोग आदि हुने गरेको पाइन्छ ।
कोलोराडो बोल्डर युनिभर्सिटीका डायरेक्टर सेलिन वेटरका अनुसार, ‘बिहान चाडै उठ्दा स्वास्थ्य लाभ मिल्छ ।’ राती लामो समयसम्म बस्ने, अझ धुमपान, मद्यपान गर्नेको स्वास्थ्यमा एकदम संकट आउन सक्छ । जबकी बिहान चाडै उठ्ने, टहलने, व्यायाम गर्ने, योग गर्ने व्यक्ति निरोगी र तन्दुरुस्त हुन्छन् ।
‘साइकेटि्रक रिसर्च’ नामक पत्रिकाले गरेको रिसर्च अनुसार राती अबेरसम्म बस्ने र बिहान अबेर उठ्ने व्यक्तिमा सामान्य भन्दा दुई गुना बढी डिप्रेसनको समस्या हुनसक्छ ।
admin01053 २ वर्ष अगाडि जलवायु परिर्वतन